အသံလွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း - - Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ DigiLink နှင့် InfinityLink အတူအိုင်ပီပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများအတွက်ထိရောက်မှုကိုတိုးပှားရည်ရွယ် NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ DigiLink နှင့် InfinityLink အတူအိုင်ပီပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများအတွက်ထိရောက်မှုကိုတိုးပှားရည်ရွယ်
Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ DigiLink နှင့် InfinityLink အတူအိုင်ပီပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများအတွက်ထိရောက်မှုကိုတိုးပှားရည်ရွယ်
WESTFORD, Mass - ။ မတ်လ 29, 2017 - Artel ဗီဒီယိုစနစ်များဆန်းသစ်, Real-time ၏တစ်ဦးကမ္ဘာ့အဆင့်မီဝန်ဆောင်မှုပေး, မာလ်တီမီဒီယာ ယနေ့ 2017 မှာကုမ္ပဏီ၏ DigiLink နှင့် InfinityLink မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်းအတွက်တိုးတက်လာသောအိုင်ပီ features တွေနဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်အစီအစဉ်များကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ပေးပို့ဖြေရှင်းနည်းများ, NAB ပြရန်.
စက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံး-အိုင်ပီကွန်ရက်များဆီသို့ဦးတည်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆက်လက်အဖြစ်, Artel ရဲ့ DigiLink နှင့် InfinityLink ပလက်ဖောင်းကပိုထိရောက်ဗီဒီယို Over-IP ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများအတွက် bandwidth ကိုပိုမိုအသုံးချပေးအသစ်များကိုဖြေရှင်းချက်ပူဇော်ဖို့ဆက်လက်။ အဆိုပါ 2017 မှာ NAB ပြရန်, Artel / 3G ပို့ဆောင်ဘို့ သာ. ကြီးဆိပ်ကမ်းကိုသိပ်သည်းဆအပါအဝင်ယင်း၏ DigiLink မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်းအသစ်အိုင်ပီ features တွေနဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပြပါလိမ့်မယ်HD/ SD က-SDI နှင့် asi အဖြစ် 10 Gigabit Ethernet (10GbE) ကျော်မြန်နှုန်းမြင့်ဒေတာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထောက်ပံ့ interfaces SMPTE 2022-7 ချောမွေ့စွာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Switching ။
"ဒီနေ့ရဲ့ကွန်ရက်မျက်နှာစာလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများကြီးထွားလာလိုအပ်ချက်များကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ ပို. ပို. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်," ရာဖေးလ် Fonseca, ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏ဒုတိယသမ္မတကလည်း, Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ။ "Artel စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရှုပ်ထွေးသောစိန်ခေါ်မှုများနားလည်နိုင်သည်။ Artel ရဲ့ Multichannel အိုင်ပီတံခါးပေါက်ဖြေရှင်းချက်အိုင်ပီကွန်ယက်ကိုကျော် Workflows အတွက် သာ. ကြီးမြတ်ထိရောက်စွာအောင်မြင်ရန်လိုအပ်သောဘက်စုံသုံးနှင့်ဆိပ်ကမ်းသိပ်သည်းဆပေးပါသည်။ "
Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ သရုပ်ပြပါလိမ့်မယ် SMPTE 2022-7 ချောမွေ့စွာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဟာ DigiLink ပလက်ဖောင်းအတွက်စွမ်းရည်သို့ပြောင်းပါနှင့် 2017 မှာ InfinityLink ပလက်ဖောင်းအတွက် multivendor IP ကိုအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် NAB ပြရန် တဲ N4511 ၌တည်၏။ တက်ရောက်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်အားဖြင့်ရပ်တန့်ဖို့တိုက်တွန်းပါသည်။
Artel ၏ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုအပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်မှာရရှိနိုင် www.artel.com.
အေျကာင္းအရာ Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ
Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ ဆန်းသစ်, Real-time ၏လောကဓာတ်-class ကိုပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်ပါသည်, မာလ်တီမီဒီယာ ကမ္ဘာ့စျေးကွက်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ပေးပို့ဖြေရှင်းနည်းများ။ Artel ရဲ့ပေါင်းစည်း IP- နှင့်ဖိုင်ဘာ-based ဖြေရှင်းချက်ဆုရ DigiLink မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်းများပါဝင်သည်; ထုတ်လွှင့်မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက် InfinityLink; နှင့် FiberLink, fiber optic ဂီယာထုတ်ကုန်များစက်မှုလုပ်ငန်းအကြီးမားဆုံးရွေးချယ်မှုတဦး။ Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ တစ်ဦးဝန်ထမ်းပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.artel.com.
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Artel/Artel-DigiLinkInfinityLinkStack.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ'' DigiLink နှင့် InfinityLink မီဒီယာပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်းများ
အလည်အပတ် Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ အဆိုပါ 2017 မှာ NAB ပြရန်, Booth N4511
တွစ်တာပေါ်မှာ Share:twitter.com/intent/[အီးမေးလျ protected]_Video%20aims%20to%20increase%20efficiencies%20in%20IP%20transport%20services%20with%20DigiLink%20and%20InfinityLink.%20-%20https://goo.gl/NUrT01
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ 2017 NAB ပြရန် Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း DigiLink ထိရောက်စွာ InfinityLink အိုင်ပီကွန်ယက် အိုင်ပီပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများ NAB 2015 NAB 2016 NAB16 nabshow	2017-03-31
ယခင်: အကျိုးအမြတ်မယူသော Marin တီဗီမှာ Marin အသုံးချဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ် Cross-Converter ၏အဝန်း Media Center ကို
နောက်တစ်ခု: စျေးသက်သာ, သုံးစွဲမှုအများဆုံးလွယ်ကူမှုနှင့်အတူအသံလွှင့်-အရည်အသွေးဗီဒီယို Delivery များအတွက် Osprey ဗီဒီယိုဖြည့်စွက်နယူး Talon ဟာ့ဒ်ဝဲ encoding